ချစ်ဖြိုး၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
MaleုkulalumpurMalaysia Like0members like this
ဘလော့များဆွေးနွေးချက်များအဖွဲ့များဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ ချစ်ဖြိုး's Likes လက်ခံရထားသောလက်ဆောင်များ
ချစ်ဖြိုး leftacomment for ကျော်ဇင်"သူငယ်ချင်းအားလုံးတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ"Aug 13, 2012ချစ်ဖြိုး ဓမ္မ မိတ်ဆွေအသစ်တစ်ယောက်ကို ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺မှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်Aug 11, 2012 ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺.... မှတရားဓမ္မများကိုလေ့လာမှတ်သားကျင့်ကြံကြိုးစား
12:42am အချိန်April 30, 2013, တွင်whitecolor မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
10:20pm အချိန်August 11, 2012, တွင်ဇော်ထက်မောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကြိုတာနောက်ကျခဲ့သည်ရှိသော် နားလည်ပေးရန်အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။
ပိန်ဖောင်း ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
ကောင်းမြတ်မင်း ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
Top News · Everything မြူနှင်းမှုံ liked thein wai's blog post 'လူတိုင်းလူတိုင်း ခံစားနေရတဲ့ “ ဒုက္ခ (၇) မျိုး ” ။'3 minutes agoSoe Gyi shared လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post on Facebookဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာ ၀ိပဿနာတရားကို ပွားများ မှတ်သားသေးသလား5 minutes agoSoe Gyi liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာ ၀ိပဿနာတရားကို ပွားများ မှတ်သားသေးသလား'6 minutes agoSoe Gyi shared မူကြိုဆရာ's blog post on Facebookသေရမှာကြောက်သူ (၄) ဦး နှင်. သေရမှာ မကြောက်သူ (၄) ဦး20 minutes agoSoe Gyi liked မူကြိုဆရာ's blog post 'သေရမှာကြောက်သူ (၄) ဦး နှင်. သေရမှာ မကြောက်သူ (၄) ဦး'21 minutes agoSoe Gyi shared မူကြိုဆရာ's blog post on Facebookနက်နဲထူးဆန်း မြတ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်သင်တန်း မှတ်စုများ24 minutes agoSoe Gyi liked မူကြိုဆရာ's blog post 'နက်နဲထူးဆန်း မြတ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်သင်တန်း မှတ်စုများ'24 minutes agoSoe Gyi shared thein wai's blog post on Facebook“ ငါက ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင် တိပိဋကဓရ ” တဲ့ (ကပိလ သုတ္တန်)။30 minutes agoSoe Gyi liked thein wai's blog post '“ ငါက ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင် တိပိဋကဓရ ” တဲ့ (ကပိလ သုတ္တန်)။'30 minutes agoSoe Gyi shared dimplemit's blog post on Facebookအတိတ်မှသမထနှင့်ဝိပဿနာအထုံတို့ပစ္စုပ္ပန်တွင်အကျိုးပေးပုံ1 hour agoSoe Gyi liked dimplemit's blog post 'အတိတ်မှသမထနှင့်ဝိပဿနာအထုံတို့ပစ္စုပ္ပန်တွင်အကျိုးပေးပုံ'1 hour ago၄၄၂ဇော်နိုင် commented on dimplemit's blog post 'အတိတ်မှသမထနှင့်ဝိပဿနာအထုံတို့ပစ္စုပ္ပန်တွင်အကျိုးပေးပုံ'"ကျေးဇူးပါ"2 hours ago More... RSS